Chirongwa Chekudzivirira Zvino Zvinotenderwa kuSan Francisco Indoor Mabhizinesi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Chirongwa Chekudzivirira Zvino Zvinotenderwa kuSan Francisco Indoor Mabhizinesi
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Culinary • tsika nemagariro • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
San Francisco Meya London Inobereka
San Francisco inoda mabhizimisi munzvimbo dzakakwirira-dzinosangana mukati memukati kuti vawane uchapupu hwekudzivirira kubva kuvashandi vavo nevashandi kuti vapinde mukati mezvivako.
Hutano kurongeka chinodikanwa chehuchapupu hwehutachiona hwakazara hwevateveri vezvirimo zvemukati zveveruzhinji, kusanganisira mabhawa, maresitorendi, makirabhu uye magyms anotanga kushanda musi waAugust 20.
Hutano kurongeka kunoitwa kudzivirira kubva pakupfuurira kupararira kwe COVID-19, kunyanya pakati pevasina kubayiwa.
Kuraira kweSan Francisco zvakare kunogadzira humbowo hutsva hwekudzivirira hutachiona hwezviitiko zvikuru munzvimbo dzemukati.
Meya weSan Francisco akazarura hutano hutsva hwakagadzirirwa kuchengetedza kubva pakupfuurira kupararira kwe COVID-19, kunyanya pakati pevasina kubayiwa, vachichengeta mabhizinesi akavhurika nekubatsira kuona kuti zvikoro zvinoramba zvakavhurika.
Chirongwa chekudzivirira ikozvino chinosungirwa kuSan Francisco mabhizinesi epamba
Meya London Breed yakazivisa nhasi izvo San Francisco zvinoda mabhizinesi mune mamwe akakwirira-anobata epamukati zvikamu kuti vawane humbowo hwejekiseni kubva kune avo vanovashandira nevashandi kuti vapinde mukati mezvivakwa.
Pamusoro pezvo, kurongeka kweguta nyowani kunogadzira humbowo hutsva hwekudzivirira hutachiwana hwezviitiko zvakakura munzvimbo dzemumba, zvinoda kuti varipo vane makore gumi nemaviri kana kupfuura pazviitiko zvine vanhu chiuru kana kupfuura vape humbowo hwejekiseni.
"Tinoziva kuti kuti guta redu ridzokere kubva kudenda uye ribudirire, tinofanirwa kushandisa nzira yakanakisa yekurwisa COVID-19 uye ndiwo majekiseni," akadaro Breed.
Pakutanga, nyika nemitemo yemunharaunda yaida humbowo hwekubaiwa kana kuyedzwa kuenda kune mega zviitiko-zvine vanhu zviuru zvishanu kana kupfuura.
Nyowani yehutano kurongeka chinodikanwa chehuchapupu hwehutachiona hwakazara hwevateveri vezvirimo zvemukati zveveruzhinji, kusanganisira mabhawa, maresitorendi, makirabhu uye magyms anotanga kushanda musi waAugust 20.
Kuchengetedza mabasa nepo ichipa nguva yekuterera, humbowo hwechirwere chekudzivirira hwevashandi hunotanga kushanda muna Gumiguru 13 kune vashandi, sekuzivisa.
Zvirongwa zvekudzivirira zvezviitiko zvemukati, zvakavanzika uye neruzhinji, zvine vanhu chiuru kana kupfuura varipo zvinotanga kushanda musi waNyamavhuvhu 1,000.